मन्त्रीसँग सम्बन्ध राख्न दबाबपछि मोडल उपाध्यायले बुवालाई फोन गरिन, त्यसपछि ६ तलमाथिबाट हाम फालिन, केछ अवस्था ? — Imandarmedia.com
मन्त्रीसँग सम्बन्ध राख्न दबाबपछि मोडल उपाध्यायले बुवालाई फोन गरिन, त्यसपछि ६ तलमाथिबाट हाम फालिन, केछ अवस्था ?
काठमाडौं । चर्चित मोडल गुनगुन उपाध्यायले होटलको ६ तलाबाट हाम फालेर जीवन त्यागको प्रयास गरेकी छिन् ।उनको अवस्था अहिले सामान्य रहेको छ । तर यो विषयमा नयाँ खुलासा भएको हो । उनका आफन्तले उनलाई ब्ल्याकमेल गरिएको बताएका छन् ।
फोटोसुटको नाममा केही व्यक्तिले उनले नुहाएको भिडियो बनाएका थिए । भिडियो बनाएपछि राजस्थान सरकारका मन्त्री रामलाल जाटसँग सम्बन्ध कायम गर्न दबाब दिइयो ।
प्रहरीले मोडललाई सोधपुछ गरी बयान लिएको छ । प्रहरीले भने यसबारे केही खुलाउन आनाकानी गरिरहेको छ । मोडलका भाइले भारत, राजस्थान, जोधपुरको रतनदा प्रहरी चौकीमा ब्ल्याकमेलिङको मुद्दा दायर गरेका छन् ।
फोटो खिच्ने बहानामा अन्तरंगका भिडियो बनाइयो -मोडलका आफन्तका अनुसार उनी सारी र गहनाको मोडलिङका लागि उदयपुर गएकी थिइन् । उदयपुरका दीपिका र अक्षत नामका व्यक्तिहरूले उनलाई मोडलिङ गराए ।
नेतालाई पनि फसाउने योजना -परिवारका अनुसार दीपिका र अक्षतको नेतालाई पनि फसाउने योजना थियो । मोडलले यो कुरा आफ्नो परिवारका सदस्यलाई बताएकी थिइन् ।
फोनमा सबै कुरा सुनाइन् -उदयपुरबाट आउँदा फोनमा मोडलले आफ्नो सबै कुरा सुनाएको परिवारले बताएको छ । आफूमाथि गलत व्यवहार भएको भन्दै जीवन त्याग गर्न लागेको कुरा उनले परिवारलाई बताएकी थिइन् ।
बयान दिएपछि फेरि बोलाइन् -प्रहरीले करिब एक घण्टा’ सम्म उनको बयान लियो । जब प्रहरी हिँड्न थाल्यो, तब मोडेलले इशारा गर्दै रोकिन् । प्रहरीलाई रोकेर उनले भनिन्, ‘मैले अझै केही भन्नु छ ।’
त्यसपछि आधा घन्टासम्म उनले अरु कुरा पनि सुनाइन् । अनुसन्धानमा जोधपुरको होटल र रेष्टुरेन्टको पूर्ण जानकारी रहेको खुलेको छ । होटल व्यवसायीले पनि उनलाई चिन्थे । त्यसैले उनी सिधै होटेलमा आइन् र छतमा गइन् । त्यहाँबाट हाम फालिन्, तर भाग्यले साथ दिएपछि उनको मृत्यु भएन् ।